Qofkii ugu horreeyay oo coronavirus ugu geeriyooday Soomaaliya | Radio Hormuud
Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in dhimashadii ugu horreysay ee uu sababay coronavirus ay ka dhacday magaalada caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Wasiiradda caafimaadka dawdlada federalka soomaliya Fowziya Abiikar Aaadan ayaa xaqiijisay in qof la xanuunsanaa coronavirus uu ku geeriyoodey gudaha Soomaaliya. Qofka geeriyooday waxuu ahaa Muwaadin soomaaliyeed oo 58 jir ah, ku geeriyoodey Isbitaalka Martiini.
Shalay ayaa laga soo qaaday mid ka mid ah isbitaallada Muqdisho halkaas oo uu ku xanuunsaday. Waxaa intaas dheer in aanu dibadda ka iman ee uu ahaa qof magaalkada Muqdisho deggan.
Waxay sidoo kale Wasiiradda sheegtay in 4 kiis oo cusub oo coronavisus ah la diiwaan galiyay.
War-saxaafadeed ay Wasaaradda Caafimaadka soo saartay oo ay arrimihii ugu dambeeyay ee COVID-19 ku faah-faahineysay ayaa u qornaa sidan:
Isku darka tirada guud ee cudurkan ee Soomaaliya ayaa hadda noqotay 12.